गणतन्त्र खतरामा परेकै हो त ? « Harekpal
-बेनीबहादुर कार्की- May 31, 2021
कोरोनाको दोश्रो लहरको मारले भर्चुअल माध्यमबाट ०७८ जेठ १५ गते नेपालमा १४ औं गणतन्त्र दिवस मनाइयो । २४० बर्षभन्दा धेरै लामो समयदेखि निरकुश राजाको शासनलाई चरणबद्दरुपमा लामो र बलिदानी सँघर्षबाट ०६५ जेठ १५ गते लोकतान्त्रिक दलहरुको शक्तीले नेपालका तत्कालीन् राजा ज्ञानेन्द्रलाई शान्तिपुर्ण ढंगले राजगद्दीबाट बिदा गरेर नार्गाजुन दरबारमा पठाएका थिए । ०६५ साल जेठ ४ गतेको संसदको पहिलो बैठकको निर्णयले राजालाई हटाएको थियो । यही निर्णयलाई नेपालको म्याग्नाकार्टापनि भन्ने गरिएको छ । यसरी ल्याइएको गणतन्त्र अहिले शिसु अबस्थामा रहेको छ । यसलाई फुलाउने फलाउने होभने धेरै दुःख,कष्ट गरेर गणतन्त्र ल्याएका अहिलेको नेतृत्वलेनै आत्मादेखि मायागर्न आबश्यक छ । ओठेभक्तीमात्र हो भने अहिलेको गणतन्त्र धेरैदिन नटिक्न सक्छ । यसतर्फ बेलैमा सबै सतर्क हुन आबश्यक छ ।
नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएको दिन मुलुक भरीनै खुशीको बर्णन् गरेर साध्यनै थिएन । निर्णायक आन्दोलन्को १९ दिन जाउलाखेलको जेल जीवन बिताएर निबासमा जानलाग्दा रींग रोडभरी बिजयउत्शव मनाइरहेका मानिसको भिडले खुट्टा टेक्ने ठाउँ नभएर यो पङ्तिकार आफ्नो कलंकीमा रहेको निबास्मा जान नपाउँदा भिडमै रातीसम्म रमाएको अहिलेपनि ताजै छ । यस्तै अबस्था भ्याली भरीनै थियो । यसरी नेपाली जनताले ज्यान्,धन माया मारेर ल्याएको गणतन्त्रका १३ बर्ष पछिपनि नेपाली जनता किन निराश भएकाछन् ? अहिलेको अहं प्रश्न यही भएको छ । औपचारिक रुपमा हेर्दा सबै ठीकठाकनै देखिन्छ । आज गणतन्त्र दिवस्को अबसरमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र दलका नेताहरुले एकाबिहानै शुभकामना ब्यतm गरेको समाचार संचार माध्यमबाट सुनियो । यसैलाई आधार मान्नेहोभने सबै ठीक मान्नुपर्ने हुन्छ । तर राजनीतिक बिश्लेषक, कानुन्का बिज्ञहरु, मानबअधिकार बादीहरु र पुर्ब प्रधान मन्त्रीहरु, पुर्ब प्रधान न्यायाधीस्हरु पुर्ब निर्बाचनका प्रमुखसमेतका पदाधिकारीहरुका पे्रस बिज्ञप्ती र भनाइहरु पढ्दा र सुन्दा वास्तबिकता फरक भएको बुझ्नु आबश्यक देखिन्छ । उहाँहरुको तर्कमा सरकारको काम काबाहीकै कारण अब नेपालमा गणतन्त्र खतरामा पर्न सक्छ ।
त्यसैले सम्बन्धीत सबैले समय छँदै सोच्न जरुरी भएको सुझाव उहँहरुले दिनु भएको छ । हुनपनि हो बर्तमान घटना परिबेशलाई हेर्नेहोभने यथार्थ मिल्दोजुल्दो पाइएको छ । बिश्व इतिहास र नेपालको बिगतलाई हेर्नेहोभने यही कुरा पुष्टि हुन्छ । सत्तामा बसेका सबैले सबैकालखन्डमा आफुले गरेका कामलाई ठीक भनेकै पाइने गरेको छ ।
पंचायत कालको अन्तिम् समयमा यो पङ्तिकारले एकजना अंचलाधीश सँगको भेटमा कुरा हुँदा जंगिएर जुन ब्यबस्था आएपनि अंचलाधीश नभै देश चल्दैन भनेर मेरो प्रश्नको उत्तर दिएका थिए । खै अहिले अंचलाधीश नभएपनि १५ बर्ष देखि प्रशासन प्रशासन् चलेकै छ । यसरीनै पंचायतका शतmीसाली पदमा रहेका अंचलाधीश,उनलाई बनाउने स्वयं राजा,र सो अघि १०४ बर्षसम्म रजाँइ गरेका राणाहरुपनि म नभै चल्दैन भन्ने भ्रममा परेर सकिएका हुन । अहिले नेपालको संबिधान ०७२ को धारा ७६ को १ देखि ५ सम्मको प्रधानमन्त्री मैहुँभनेर असम्बैधानिक तरीकाले संसद बिघटन्कालागि सिफासि गरेका प्र.मं. के.पी.शर्मा ओली र गलत सिफास्लिाई आँखा चिम्लेर सदरगरि संसद बिघटन् गर्नु भएकी राष्ट्रपति बिद्यादेवी भन्डारीलाईपनि उनै दिन नआउलान्भन्न सकिंदैन । यही भएकाले असंबैधानिक तरीकाले संसद बिघटन् गरेपछि पुर्ब राजा ज्ञानेन्द्रले टयीटमा दिएको प्रतिक्रिया गम्भीर र गहिरो भएकाले सत्ताधारीलेसमेत बेलैमा बुझ्न जरुरी छ । मुखले सत्तामा बसेकाले गणतन्त्रको नाम ओठेभक्तीकोरुपमा जपेपनि काममाभने दलका प्रमुख बनेकाहरुले मै राजाहुँभन्ने शैलीमा आफ्नै स्वार्थमा काम गरेकाले दलहरुमा भएको बिभाजन बढ्दो बिकृति र भ्रष्टाचारनै गणतन्त्रकोलागि खतरा हुनसक्छ । पंचायत कालमा यो पंतिmकार स्नातकमा पढ्दा त्यो बेलाको कोर्समा १०० को पंचायत बिषय अनिबार्य पढ्नु पर्नेभएकाले पढ्दा ०१७ सालभन्दा पहिलेको बहुदलीय प्रजातन्त्रका असफलताका कारणहरु पंचायतको पुस्तकमा उल्लेख गरेका बुँदाहरु मौजुदा अबस्थामा यसरी शासकहरुकै करतुतले भइरहेका स्वार्थ परक कामहरु उस्तै उस्तै रहेका मेरा मानस्पटलमा ताजै छन् । यसरी शासकहरुको करतुतलेनै नेपालसमेत बिश्वकै शासक र शासन प्रणाली पत्तैनभै ढलेको बिश्व इतिहास् साक्षी छ । त्यसैले राजा नीरो देखि आफैंले ढालेका राजा ज्ञानेन्द्रलाई हेरेरपनि नसिक्ने होभने योभन्दा अक्षम्य गल्ती अरु केही हुने छैन । यीनै तथ्यलाई अनुभुत गरेर बेलेमा सत्तत्रधारीहरु सच्चिनुको बिकल्प छैन ।
निष्कर्षमा सत्ताधारीले आफ्नो स्वार्थबस् गरेका सबैकामलाई सँधै ठीक भनेकाले अहिले सरकारको असंबैधानिक ढंगले संसद बिघटन्को सिफारिस्को आधारमा अहिलेको कोरोनाको कहरमा निर्बाचनगर्नेगरी राष्ट्रपतिले गरेको घोषणाको बिरुद्दमा १४६ सांसदहरुले न्यायकोलागि सर्बाच्च अदालतमा रिट निबेदन दिएका छन् । काम चलाउ सरकारले बार्षिक बजेटसमेत आध्यादेशबाट ल्याएको यो सरकार र राष्ट्रपतिले गरेको असंबैधानिक र गलत काम सच्याउन अहिले अदालतलाई सुनौला अबसर रहेको छ ।
संवैधानिक त्रुटी गरेको र बहुमत सांसदसमेतका यथेष्ठ प्रमाणहरुका आधारमा अदालतबाट न्याय पाइनेछभन्नेमा सांसदसमेत आम नेपाली बिश्वस्त रहेका छन्। । यती हुँदा,हुँदैपनि अदालतले न्याय नदिएमा दुर्भाग्य हुनेछ । यसैलाई नीहुँ बनाएर देशी ,बिदेशी शक्तीले खेल्ने बाटो पाउने छन् । यसरी सँधै सबैले गल्ती गरिरहन संभब हुनेछैन । यस्तै गल्ती गरिरहने होभने हिजो ठुलो संघर्ष गरेर नेपाली जनताले ल्याएको गणतन्त्रको रक्षार्थ फेरीपनि आफ्नो राष्ट्रप्रतिको दायित्व पुरागर्न पछिपर्ने छैनन् । सत्तामा बसेर गल्ती गरिरहनेहरुले बेलैमा यो यथार्थ आफ्नालागिसमेत हेक्का राख्न जरुरी छ । यसरीनै सँधै सबैले आफ्नै स्वार्थमा काम गरिरहनेहोभने नेपालको मौजुदा गणतन्त्र खतरामा पर्न सक्छ ।